]LED Light emeputa / Supplier kemgbe 2004 | LEDIA ọkụ
LEDIA na-enye ndị mmekọ anyị gburugburu ụwa ngwaahịa bara uru dị elu.
Igwe ọkụ ime ụlọ edu
Ọkụ Led High Bay Light
Vapo Tight Light
Ìhè ihe àmà na-edu edu
Ọkụ n'èzí Led
Etu ụzọ mgbe niile
Ịkụnye ọkụ mgbe niile
Nkà & Omenala
Ụlọ oriri na ọṅụṅụ & Ụlọ ahịa ịzụ ahịa
mgbatị ahụ & ntụrụndụ
Ọbá akwụkwọ & ebe ngosi ihe mgbe ochie
Ngwaahịa ma ọ bụ ihe ọhụrụ egosipụtara
LEDIA na-enye ndị mmekọ anyị gburugburu ụwa ngwaahịa ngwaahịa dị elu,
Ha niile bụ DLC/UL/ETL/TUV/SAA/CE/ENEC tozuru oke.
]Ngwa ọkụ n'èzí
]Mmekọrịta mmekọrịta chiri anya na ndị ahịa na-enyere ndị otu anyị aka ịnye ọrụ bespoke na-abụghị nke abụọ.
]Ngwa ime ọkụ
]Anyị raara onwe ha nye imewe otu na mmepụta otu ndị ike nke inye customization ngwọta dabara.
]Ngwa ọkụ ụlọ
Tọrọ ntọala na 2004, LEDIA bụ ụlọ ọrụ teknụzụ dị elu nke steeti. Ọ dị na Huadu District (nke dị nso na ọdụ ụgbọ elu mba ụwa nke Guangzhou Baiyun), ọ bụkwa onye enyemaka nke Honglitronic Group. Mgbe ọtụtụ afọ nke mmepe gasịrị, LEDIA bụ onye guzobere aha ọma ma ụlọ na esenidụt, aghọwo ụlọ ọrụ na-eduga na ụlọ ọrụ ọkụ ọkụ. Maka nkwado nke ụlọ ọrụ ahụ, talent na ihe ọhụrụ bụ isi mgbe àgwà bụ ọbara ndụ.
LEDIA nwere ụlọ nyocha nyocha ọkwa steeti CNAS, na-ejide n'aka na ngwaahịa niile na-agafe ule metụtara tupu ịga ahịa. Ngwaahịa anyị na-emepụta gụnyere LED bare board strip light, PVC / silicon strip light, kabinet ìhè na ihe ọkụ ọkụ ndị ọzọ niile nwetara China CCC asambodo, US UL / ETL asambodo, EU CE, ROHS, TUV na Australia SAA, DLC, ENEC nyocha, iji kwe nkwa ntụkwasị obi ndị ahịa na ngwaahịa anyị. Jiri ngwaahịa ọkụ kwụ ọtọ mee ka ụwa mata ihe bụ ihe LEDIA na-achụ oge niile.
Ọhụụ-Bụrụ ụlọ ọrụ pụtara ìhè n'ọhịa nke ọkụ ọkụ LED na China.
Ozi- Mepụta uru ọkụ na sayensị na teknụzụ, gbalịsie ike imezu nrọ otu.
]Ọnụọgụ nke patent
LEDIA na-enye ndị mmekọ anyị gburugburu ụwa ngwaahịa ngwaahịa dị elu, gụnyere LED Outdoor Lighting, LED Industrial Lighting, LED Commercial Lighting na LED Decorative Lighting.
MMADỤ KA MMADỤ Azụmahịa ka mma
Onye kọntaktị: Sunny Sun
Nọmba ekwentị: +86-020-37706029
Adreesị: No.1 Xianke 1st Road, Huadong Town, Huadu Dist, Guangzhou, China